Hyundai လုပ်ငန်းသုံးယဉ် ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Hyundai Hyundai Hyundai County Hyundai Libero Hyundai Porter Hyundai Porter II
Han Htun Aung
Mdy Licensed / Company Named 4L/ 4*** / New Tires on6Wheels / haveahood on back of car .
2009 Hyundai Porter II good
အဖြူရောင် ရောင်နဲ့ ဤHyundai Porter II good 2009 Please admin Hyundai Porter|| Engine power 2500CC Fule Type Diesel 2500CC ဒီဇယ်​အင်​ဂျင်​ ဖြစ်​သည့်​အတွက်​ ဆီစားနှုန်းသက်​သာပြီး ​ရှေ့​ခေါင်း ခန်...
White Hyundai Porter II 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...
White Hyundai Porter II 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...
White Hyundai Porter II 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...
White Hyundai Porter II 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...
White Hyundai Porter II 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...
White Hyundai Porter II 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...
Light Blue 2003 Hyundai Libero for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.
White 2005 Hyundai Libero for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.
Red 2005 Hyundai Libero for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.
Hyundai Libero 2005 (Lks 105)
White 2005 Hyundai Libero for sale. The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.
ဟရွန်ဒေး လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များ
ဟရွန်ဒေး ဆိုတာ တောင်ကိုရီးယား အခြေဆိုက် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း အဖွဲ့ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ကား ထုတ်လုပ် ကုမ္မဏီများထဲက တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဟရွန်ဒေး အမည်နဲ့ အိမ်သုံး ကားများ အောင်မြင်သလို လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များလည်း အောင်မြင် ပါတယ်။ မြန်မာပြည် ကို အဟောင်း ကော အသစ် ကော နှစ်မျိုး စလုံး ဝင်ရောက် ပါတယ်။ ယင်းထဲ မှာမှ မြန်မာပြည်ကို အရောက် များတဲ့ ကား အချို့ ကိုပဲ ရွေးချယ် ဖော်ပြ လိုက်ရ ပါတယ်။
လူသုံးများ ဟရွန်ဒေး လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များ
ပေါ်တာ ဘောက်စ်ကား လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ကား ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင် အရွယ် ၂၄၀၀ စီစီ ဝန်းကျင် ရှိတဲ့ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ဆီ သုံး၊ ဒီဇယ်သုံး နှစ်မျိုး စလုံး ထုတ်လုပ် ပါတယ်။ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ မော်ဒယ်တွေလည်း ဝင်ရောက်ပြီး အမြင့်ပိုင်း အနေနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်တွေတောင် အသစ်တွေ အနေနဲ့ ဝင်ရောက် ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုး ကတော့ ဟရွန်ဒေး ဒတ်ဘယ်ကပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၂၅၀၀ စီစီ အရွယ် ရှိပြီး ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ် နှစ်မျိုး စလုံး ထုတ်လုပ် ထားပါတယ်။ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဝန်းကျင်တွေ မြန်မာပြည်ကို အဝင်များ ပါတယ်။ အော်တို ဂီယာနဲ့ ရိုးရိုး ဆိုပြီးတော့ ခွဲခြား ထုတ်လုပ် ထားပါ သေးတယ်။ ဈေးနှုန်း အားဖြင့်ကတော့ အကျဘက်ကို ဦးတည်နေပြီး လောလောဆယ် ကတော့ သိန်း ၁၂၀ ဝန်းကျင် နဲ့ ရနိုင် ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်တီ ဘတ်စ် ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ အတော်လေး လူသုံး များတဲ့ မြို့တွင်းသုံး ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ အများပြည်သူသုံးမှာ မဟုတ်ပဲ ပုဂ္ဂလိဂ လုပ်ငန်းများက အသုံးပြုတာ များပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၃၇၀၀ စီစီ ဝန်းကျင် ရှိပြီး ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ် နှစ်မျိုး ထုတ်တဲ့ ကားများ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၄ မော်ဒယ် အဝယ် များ ပါတယ်။ ဟရွန်ဒေး ပေါ်တာ တူး ဆိုတဲ့ကားလည်း ရှိပါသေးတယ်။ သူက ပေါ်တာ ဝမ်းနဲ့ အင်ဂျင်ကြီးပြီး စွမ်းဆောင်ရည် နည်းနည်း မြင့်ရုံ ပါပဲ။ ၂၀၀၆ မော်ဒယ် အဝင်များပြီး တစ်ပတ်ရစ် မြို့တွင်းနဲ့ နယ်နီး ခရီးသုံး အလတ်စား ကုန်တင်ယာဉ် အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တို ဂီယာ နဲ့ ရိုးရိုး ဆိုပြီးတော့ နှစ်မျိုး ထုတ်လုပ် ပါတယ်။
ဟရွန်ဒေး လုပ်ငန်းသုံးယာဉ် ဝင်ရောက်ပုံ
အများစု ကတော့ ဂျပန် တစ်ပတ်ရစ်ကား လေလံ ဈေးကွက် ကနေ ဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဟရွန်ဒေး က အခုမှ မြန်မာပြည်မှာ အရောင်းစင်တာ နဲ့ ဆားဗစ် စင်တာ ဖွင့်လှစ်ဖို့ ပြင်ဆင် နေပါတယ်။ ဒီတော့ လောလောဆယ်မှာ ဝယ်မယ် ဆိုရင် ဂျပန် လေလံ ဈေးကွက်ကိုပဲ အားကိုး နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပြီးတဲ့ ကီလိုမီတာကို အတိအကျ ဖော်ပြထားတာကြောင့် ဝယ်ယူသူ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်လို့ ရပါတယ်။ အသစ်ကိုလည်း သီးသန့် အော်ဒါမှာ ဝယ်ယူမှု များ ရှိပါတယ်။ ကိုးရီးယားထုတ်မော်တော်ယာဉ်များဖြစ်တဲ့ ကီးယာ ထုတ်ကားများကို လေ့လာလိုပါကလည်း motors.com.mm မှလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်အမျိုးမျိုးကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် လေ့လာ စုံစမ်း ဆက်သွယ် ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။